U-Sally Balcombe uqoke i-CEO entsha ye-VisitBritain
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izingxoxo » U-Sally Balcombe uqoke i-CEO entsha ye-VisitBritain
ILODDON, E-England – UChristopher Rodrigues, ongusihlalo weVisitBritain, usememezele uqokwa kukaSally Balcombe njengesikhulu esiphezulu sale nhlangano.
ILODDON, E-England – UChristopher Rodrigues, onguSihlalo weVisitBritain, usememezele uqokwa kukaSally Balcombe njengesikhulu esiphezulu sale nhlangano. Ukuqokwa kulandela ukufuna “okuncintisanayo” futhi kubikwa ukuthi kuza nokusekelwa okuphelele kwawo wonke amalungu ebhodi.
Ngaphambilini, u-Balcombe ubengumqondisi ophethe weBritish Airways Holidays kanye nophiko olukhethekile lwelanga e-TUI. Njengomqondisi wezohwebo we-Opodo kanye ne-CMO e-Travelport, ujwayelene namandla edijithali nobuchwepheshe ukuze ahlanganyele futhi akhuthaze amakhasimende. Muva nje, u-Balcombe ube yilungu leBhodi le-VisitBritain, uMbusi Wemnyuziyamu yase-London, uKhomishana Wezamagugu EsiNgisi, kanye Nomqondisi Ongeyena Ophethe KaMnu noNkk Smith ngenkathi futhi eluleka idlanzana lamabhizinisi agxile endaweni yedijithali.
URodrigues waphawula ukuthi izibalo zezokuvakasha zaseBrithani ezingenayo ziyaqhubeka nokuphula amarekhodi, futhi umkhankaso OMKHULU wokumaketha ubonakale uphumelela ekuletheni izivakashi ezweni. “Inselelo manje iwukuqinisekisa ukuthi ezokuvakasha ezingena ngaphakathi, imboni yokuthumela ngaphandle kwesihlanu ngobukhulu eBrithani, iyaqhubeka nokuletha imisebenzi kanye nokukhula ezweni lonke ngokubambisana nozakwethu abanamasu, iNational Tourist Boards,” esho.
Esitatimendeni, u-Balcombe uthe i-VisitBritain isivele "iyi-ejensi esebenza kahle kakhulu" enesu elicacile lokukhula kuze kube ngu-2020. "Isipiliyoni sami sezohwebo nesikhathi njengeLungu Lebhodi sisho ukuthi ngiyasiqonda isidingo sokugxila kumakhasimende ethu, ngiqondise kumakhasimende ethu. ukumaketha ukuze babakhuthaze ukuthi bahlole iBrithani futhi basebenze ngaphandle komthungo kubo bonke ababambisene bezinkampani zikahulumeni nezizimele ukuqinisekisa ukuthi siyaqhubeka nokuletha izinhlelo zethu zokukhula,” wengeza.
Ngaphezu kwalokho, uSajid Javid, uNobhala Wezwe Wezamasiko, Abezindaba Nezemidlalo, ubuze uChristopher Rodrigues ukuthi angavuma yini ukuqhubeka njengoSihlalo ngemuva kokuphela kwesikhathi sakhe samanje. U-Rodrigues uvumile.
I-Destination Asia Indonesia iqoka umphathi omusha weMICE
U-Martine Ainsworth-Wells ujoyina i-ETOA njengoMqondisi Wezokumaketha Nezohwebo
I-Sandals Foundation Ilondoloza Imisebenzi Yezandla Yase-Caribbean, Amasiko...